Ubuhlobo obuhle phakathi kwendoda nowesifazane
Abanye besifazane bakholelwa ukuthi ubungane obunjalo abukwenzeki, abanye bayaphikisa lesi simangalo. Ake sibone ukuthi yiyiphi kubo eseduze neqiniso.
Impendulo yombuzo othi "Ingabe ubungane bukhona phakathi kwendoda nowesifazane?" Wayenesithakazelo kokubili, ngaso sonke isikhathi. Akumangalisi ukuthi ama-aphorisms amaningi anikezwa kuye. Ngokwesibonelo, u-Otto Bismarck waphinde wabonisa ukuthi ubungane obuhle phakathi kwendoda nowesifazane buyabuthakathaka ngokuqala kobusuku. Nginomngane, ngendleleni, umuntu omude, ohlangene, owesilisa omuhle, oye waphupha ngamadodakazi ayishumi nambili. Sichitha isikhathi esimnandi naye: sixoxa ngezinto zonke emhlabeni, sishintsha ama-novelties, siya e-ice rink nakwase-cinema, uma kunesidingo, sizazana ngezinkinga ezithile zasekhaya. Ngicabanga ukuthi ubungane phakathi kwethu kungenzeka kuphela ngoba akulona uhlobo lwami. Futhi mhlawumbe akuyona eyakhe, ngoba akakaze enze noma yikuphi ukuzamazama "ukubazana kangcono" (futhi ngithemba ukuthi ngeke a).
Umngane womuntu akahleleki
Iningi labantu lithi akukho buhlobo obuhle phakathi kwendoda nowesifazane. Kodwa ekuboneni kokuqala kungase kubonakale ukuthi uhlobo olunjalo lobuhlobo bobuhlobo luyizihlanganisi eziqinile. Okokuqala, akukho mncintiswano phakathi kwabahlobo abanjalo futhi, ngenxa yalokho, umona. Umngane wakho ngeke abe nomona ngokuthi ekugcineni ulahlekelwe ngu-5 kg, uya eholidini eBali, noma uthenge izicathulo ezivela ku-Christian Louboutin ngesaphulelo sama-95%. Ngokuphambene nalokho, uzojabula futhi akhokhele uma uqhubeka unakekele.
Okwesibili, njengoba engisebenza naye ethi: "Umngane womuntu uyinto engenakunqunywa ekhaya". Uhlobo luni lomngane olwenqaba ukushintsha umngane omuhle wesitolo noma ubone ukuthi kungani ukukhanya ekhishini kungashisi? Futhi uma kunesidingo, futhi ulethe ukugibela lapho udinga khona, futhi umnumzane uzobonisa. Okwesithathu, umngane onjalo akudingekile kuphela emnothweni. Anganikeza iseluleko esiwusizo ngempela. Futhi lokhu akusebenzi nje kuphela ezindabeni "zamadoda" njengesibuchwepheshe noma zezezimali. Akekho omuhle ekuhumusheni ukuziphatha komuntu njengendoda, ngakho umngane wakho uzokwazi ukukuchazela ukuthi kungani umthandi wakho "onobuwula obengenangqondo," futhi asikisela ukuthi ungenza kanjani ngcono ngaye. Yebo, futhi kuze kube sekukhethweni kokugqoka izigceme, umngane anganikeza izincomo ezimbalwa ezisebenzayo.
Maye, ngifanele ngiphucule lo uju nge-fly of tar. Iqiniso liwukuthi indlela yokwenza ubungane phakathi kwabesilisa nabesifazane ihlukile. Akumangalisi ukuthi: "Indoda inobungane ethembeni lokuqhubeka, futhi owesifazane - eyazi ukuthi ngeke kube khona ukuqhubeka." Amadoda amaningi, ngamazwi abo, kuqala kokubheka owesifazane into yocansi, futhi kuphela umqondo, umuzwa wokuhleka, ukuthanda ibhola noma izimoto zezemidlalo. Futhi akukho okumele kwenziwe, imvelo ithatha umonakalo. Kepha thina, besifazane, nalapha, nakho konke akulula. Uma umngane wesilisa angeke asizingele, ngisho ncanyana, sizokhubeka: ingabe ngingathandeki? Futhi uma kunjalo, uma ungenawo noma ungahlangabezane nanoma ubani, ngokuhamba kwesikhathi ubuhlobo buzohamba ngaphezu kwemingcele yabangane. Kunezinhlobo ezihlukahlukene zokuthuthukiswa kwezenzakalo.
Nonke nizisola ngakho, futhi ebuhlotsheni kukhona ukungaboni kahle, uxhumane kancane kancane, kuze kube yilapho ubungane buba khona.
Omunye wenu uqala ukufuna okungaphezulu, owesibili uhlela ubulili obunjalo ngendlela enobungane. Umhawu uqala, ukulawula, ukucacisa ubudlelwano, izingxabano. Ngokuvamile, futhi ubungane buphela, futhi ubuhlobo abuqali.
Uyakwazi ukuthi umane wadala omunye nomunye. Unesithakazelo kanye nezimiso ezivamile, mhlawumbe abangane abavamile, wazi kahle, futhi okubaluleke kakhulu - uhlala kahle kakhulu. Yisiphi isisekelo sobudlelwane obunothando obungathí sina?
Kodwa ake sibuyele esimweni esivamile kakhulu: ungabangani, futhi ufuna lokho ngakho konke futhi uhlale. Yiqiniso, awuhambisani nokuncoma okuncane noma izipho ezincane, into eyinhloko ukuthi ayikunikeli kunoma yini. Kungenzeka yini ukucabanga ngalokhu? Izazi zengqondo ziphendula ngokuqinisekisile. Kodwa nge-caveat eyodwa: phakathi kwakho akufanele kube ne-sexton overtones. Isibonelo, uma bobabili ningenayo i-unfree futhi nijabule nabashade nabo; Wena umbhangqwana esikhathini esidlule, xolelana futhi ungathanda ukukhuluma nje esikhathini esizayo; wena ungumngane kusukela ebuntwaneni futhi ngokoqobo waba umzalwane nodadewethu. Yiqiniso, kusekhona ubudlelwane obunobungane nomuntu ongathandabuli ngokobulili, kodwa ngathi kunengqondo, futhi ufanelwe isihloko esihlukile.
Kodwa-ke, kunoma yikuphi, ukugcina ubuhlobo obuseduze nabesilisa, kubalulekile ukugcina eminye imithetho elula "yokuphepha".
Bazimisele emicabangweni yabo ngale ndoda. Futhi uma lokhu kungabangani futhi kungenjalo kodwa ubungane, ngandlela-thile, ake umngane wakho aqonde lokhu. Ungakhathazeki ngokuthi yini engenzeka phakathi kwakho, kodwa akakaze kwenzeke noma kwenzeke, kodwa hhayi njengoba uthanda. Ungabi nomhawu ngomngane wabakhethiweyo bakhe.
Ngakho-ke ukuthi akukho ukungaqondi kahle nezimo eziyinkimbinkimbi, wethula umngane okhethiweyo wakho futhi ngezikhathi ezithile ukhulume ngazo ezingxoxweni zakho. Kodwa kuphela ngendlela enhle, noma ngabe kunjalo, ungakhathazeki ngothandekayo wakho. Amazwi anjalo angaqondwa kahle: athi, ufuna "induduzo".
Futhi ekugcineni ngifuna ukusho lokhu: akubaluleke kakhulu lapho uhlangana khona, nokuthi kungani ubuhlobo bakho bungobungane noma ukuthi buhlanganisa wena. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ubungane nomuntu abufani kakhulu nobungane nomuntu wesifazane. Lezi zinsuku kufanele zithuthukiswe ngendlela efanayo, zondliwe ngokuxhumana okuvamile, izithakazelo ezivamile, kumele zitshalwe, hhayi nje zithathwe, kodwa zinikezwe. Kodwa kukhona umehluko. Ebudlelwaneni nomuntu, into eyinhloko ukuzwa intuitively line, okuyinto uma ufuna ukugcina umngane onjalo, akufanele uwele phambili.
Kwenzeka ukuthi amantombazane aqala ukugcina ubuhlobo obuseduze namadoda ngethemba lokuningi. Njengokuthi, ngifunda okuningi ngaye, uzongisiza kangcono futhi aqonde ukuthi kungcono ukungamtholi. Yiqiniso, ukuphela okunjalo okujabulisayo kwenzeka. Kodwa kaningi kakhulu e-melodramas kunokuba impilo yangempela. Lapha yonke into ingaqeda kancane kancane: sekube nezinsuku ezimbalwa owesifazane wenhliziyo yakhe, uzobuyela esimweni somngane omuhle futhi. Ngakho-ke uma unezinhlelo zokuthandana nomngane ongabaziyo, meme ngakho ngakho ngendlela yesifazane ngaphambi kokuba uqale ukubheka ibhoksi bese umema omunye ubhiya.
Uma indoda ikhuluma njalo, kodwa ingenzi lutho?
Izixuku zobulili zamadoda
Ukuze ahlukanise noma cha, uma umyeni eya enkosikazi yakhe?
Indlela yokuziphatha nentombi?
Kungenzeka yini ukuthi uphinde ufundise umanikazi kumuntu oyedwa?
Isaladi ngebele lokukhunta inkukhu
Kungani abantu bengathandi ukusindiswa?
I-Carp efakwe ehhavini
Isisindo, ukuphakama nokusebenza kwengane
Izakhiwo kanye nokusetshenziswa kwamafutha e-rosehip
Cutlets kusuka turkey nge apula kanye namantongomane
Indlela yokwenza amabele akho aphelele: I-Bra, i-peeling, amavithamini
I-Window Decoration ye-New Year 2018 Izinja zandla
Izambatho zokugqoka ezifashisayo, Winter of 2016: izithombe zemihlobiso emidala nemifushane emifashini, Ekwindla-Winter 2015-2016
Izindlela eziwusizo zempilo yomzimba
Abesifazane baye bamisa izinhlobo zamadoda
Umklamo wokufakelwa emakamelweni aphilayo
HCG ekukhulelwe kanye nokukhulelwa kwe-ectopic